Ngwa nchekwa onwe nke Google Pixel 4 ruru ndị ọzọ nke Pixel | Gam akporosis
Google emelitere ngwanrọ Pixel na akụkọ ụfọdụ metụtara 'Nchedo Onwe' na kedu ihe ga - abụ nhọrọ iji melite oge ụra anyị. Na blọgụ ha ha wepụtara oge iji gwa anyị ihe njirimara ndị ahụ bụ.
Ha etinyekwala na nke a Otu usoro nkwalite iji gbasaa ndụ batrị na 'Batrị Na-agbanwe', n'agbanyeghị na anyị nọrọ na nhọrọ ndị ahụ iji gbaa anyị ume ihikwu ụra ma zuru ike nke ọma.
1 Batrị na ihi ụra
2 Ndị otu Google na-enyere aka na Docs na ndekọ ndekọ ụda
3 Atụmatụ Nchedo Onwe
Batrị na ihi ụra
'Battery na-agbanwe agbanwe' na-ahụ maka ịmụ ihe bụ ngwa ahụ na anyị na-eji ọtụtụ ụbọchị ma na-ebelata oge eji ya eme ihe na ndị anyị na-anaghị ejikarị eme ihe. Ma ihe ọhụụ nke ọrụ a bụ na na Pixel 2 na ngwaọrụ Google kachasị ọhụrụ ọ nwere ike ịkọ mgbe ekwentị ga-apụ na batrị ma belata ọrụ dị na ndabere nke ngwa iji mee ka ekwentị dị ogologo.
Nke ahụ bụ, na Batrị Pixel anyị ga - adịtụ “ụche” iji mee omume nke pụtara ahụmịhe ka mma na obere ihuenyo nwere ike inye anyị. Ihe ọhụụ metụtara ụra abụghị na ị ga-ehi ụra nke ọma n'ihi na emelitere ekwentị gị, mana n'ihi na o nwere ụfọdụ atụmatụ ga-enyere anyị aka ime nke a.
Ọrụ a metụtara ngwa elekere nke Pixel ma gbalịa ịnọgide na-enwe mmemme ihi ụra na-agbanwe agbanwe ụbọchị niile yana nhazi kacha mma na otu ihuenyo kwa abalị. Ebumnobi bụ na anyị na-ehi ụra n'udo mgbe anyị nwere ụda nke udo na ọ joyụ na ndabere na mmachi nkwụsị mgbe anyị na-arọ nrọ nke ndị mmụọ ozi (ma ọ bụ ndị mmụọ ọjọọ).
Ihe dị mkpa banyere ihe ọhụụ a metụtara ụra bụ na ọ bụrụ na Pixel "achọpụta" na ị mụrụ anya mgbe oge ahụ gasịrị mgbe ị na - ehi ụra, ga-enye usoro nke data iji mara oge ole anyị nọrọ teta na kedụ ihe ngwa eji ebo ya.
Ndị otu Google na-enyere aka na Docs na ndekọ ndekọ ụda
Njikọ a karịrị ihe na-atọ ụtọ n'ihi na ugbu a enwere ike ịmalite ma ọ bụ edekọ ụda ma ọ bụ kwụsị site na Enyemaka Google ma ọ bụ Google Assistant na iwu olu. Mmasị na-enweghị obi abụọ ọ bụla na na ọ ga-enye anyị ohere ịdekọ nzukọ ọrụ ma ọ bụ jiri ọgụgụ isi mee ihe ka Google nwee ike mepụta ndekọ anyị nwere nke ndị ọzọ ma ọ bụ ọbụna nke nkịta anyị.
Ugbu a anyị nwere ike ọbụna mee ederede zuru oke nke ihe onye na-edekọ na-anụ iji nyefee ya na Google Docs na anyị nwere ike ịnweta ya site na igwe ojii ma ọ bụ igwe ojii. Mmekọrịta dị egwu nke usoro usoro a iji gbakwunye ahụmịhe onye ọrụ enwetara na Pixel.
Atụmatụ Nchedo Onwe
Anyị ekwuolarị na oge Pixels ga - enwe ike ịchọpụta ihe ọghọm iji kpọọ oku mberede n'oge ahụ. Nchedo Onwe ma ọ bụ ngwa Nchedo Onwe nke Pixel 4 na-adịkwa na pixel ndị ọzọ na Nchọpụta mberede ga-adị na Pixel 3. Ekwesiri ighota na oru a adighi na mba nile ma obu ndi United States, United Kingdom na Australia ga-enwe ike iji ya.
Ndị ọzọ nhọrọ nchebe na-atọ ụtọ bụ «nchekwa nchekwa» ma ọ bụ "nyocha nchekwa", na na ịtọọ oge nbanye site na ngwa ahụ oge ọzọ. Were ya na ị ga-eji igwe kwụ otu ebe na-aga ugwu maka awa 2, ị na-arụ ọrụ a ma ọ bụrụ na ịzaghị ya na oge edepụtara, ọ ga-eme ka ndị kọntaktị mberede ahụ mara.
Onwe Nchedo na-abịa na atụmatụ ndị ahụ dị mma na ngwanrọ ahụ iji tinye uru ka ukwuu na Google Pixels na ọtụtụ n'ime gị ga-eji ya. Njirimara na ga-anọ na Pixel 4a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ndị a bụ atụmatụ ọhụrụ maka 'Nchedo Onwe' na ụra Pixel ka mma